Yakazara Spectrum Vagadziri & Vatengesi | China Yakazara Spectrum Fekitori
Kutendeseka kwepamusoro zvizere masekondi Ra98 Kaleidolite akateedzana
Chigadzirwa Tsananguro Iyo Kaleidolite TM LED dzakateedzana (Ra = 98 ± 2, Rf> 90, Rg = 100 ± 2) ine spectrum yakafanana neyezvisikwa mwenje senzvimbo yezuva uye mwenje wekupisa, iyo yakagadzirirwa neakakwirira ehupfumi hwepamusoro kutendeka, yakafara ruvara gamut uye yakakwira yakazara ruvara. Ivo vanobatsira kuwana chaiyo mavara kupa pasina chibayiro chekuvhenekesa kwemwenje, kuvimbika uye mutengo. Zvishandiso mune yekudzidzisa uye yekutengesa mwenje, chitoro chitoro, gallery, chipatara pamwe neimba mwenje. Kiyi ...
Yakakwira TLCI index studio mwenje
Chigadzirwa Tsananguro studio yekuvhenekera LED dzakateedzana (Ra = 98 ± 2, Rf> 90, Rg = 100 ± 2) ine yakakwira CRI, kuvimbika uye neruvara gamut iyo inoshamisa inowedzera kutaridzika kwezvinhu nekutendera mavara kuoneka akajeka uye akajeka mukamera kupfura. Yepamusoro terevhizheni mwenje kuenderana indekisi inovimbisa yakanakisa kuita kwemavara mune ekuratidzira skrini. Makiyi Akakosha ● Yakakwira CRI / Rf / Rg indekisi (TM-30-15) ● R1-R15> 90 ● Yakakwira TLCI index Chigadzirwa Chigadzirwa Chigadzirwa Rated voltage Rated yazvino ...
Yakakwira mhando ine nani kurongedza kupa
Chigadzirwa Chigadzirwa Sezuva rakateedzana neakakwira CRI uye kuvimbika kwakanyanya kweiyi nhepfenyuro kudzorera iro chairo ruvara rwechigadzirwa, uye yakaderera bhuruu mwenje kukuvadza zvinobudirira inodzivirira maziso uye maonero. Uye zvakare, dzino dzakateedzana zvakare dzine ruvara rwepepuru mwenje, iyo inotamba yakanaka kwazvo uye inoshanda basa kune zvidyarwa zvezvirimwa uye antibacterial. Makiyi Akakosha ● Yakakwira Ruvara kutendeka Rf ● Yakakodzera ruvara gamut Rg ● Yakaderera chikamu cheinokuvadza bhuruu mwenje Chigadzirwa Nhamba Rated voltage [V] Rated ikozvino [mA] CC ...